सिद्धान्तकारहरु नाम र ज्योतिष एक व्यक्ति को भाग्य र चरित्र ताराहरू मात्र होइन र उहाँले जन्म भएको थियो जो अन्तर्गत ग्रह, तर पनि उहाँले आफ्नो आमाबाबु भनिन्छ जो नाम प्रभावित छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यसलाई उत्पन्न र एक बच्चा को makings, र अन्य मानिसहरूको आँखा पनि आफ्नो भावनात्मक र कल्पनाशील पोट्रेट। नाम को सबै भन्दा कुनै अर्थ। तर के तपाईंले कहिल्यै शब्द गठन अक्षरहरू पनि, मूल्य छ कि विचार? विशेष गरी यो उच्चारणगरिएकोअक्षरटाइपगर्नुहोस् syllable precedes, विशेष गरी यदि राजधानी पत्र हावी छ। साथै, अक्षर को मूल्य यो नाम धेरै पटक हुन्छ जब परिलक्षित छ। उदाहरणका लागि, अलेक्जेन्डर "एक" पत्र को auspices अन्तर्गत छ, र यूजीन - "ई"। तर यहाँ हामी यो पत्र बलियो तल्ला द्वारा धेरै प्रभावित भएकोले मानिसहरू लागि "डी" मा नाम हेर्न।
के कोड यो पत्र भालु
एक मानिस जसको नाम पत्र सुरु "डी", असामान्य र तेज दिमाग समावेश को प्रतीकात्मक र भावनात्मक पोर्ट्रेट, आफ्नो कार्यहरू, उत्तरदायित्व र राम्रो परिवार मानिसको गुणस्तर लागि जिम्मेवारी लिन इच्छा। तथापि, यस्तो मानिस केहि व्यर्थमा बाह्य प्रभाव झुकाउ, capricious हुन सक्छ। को "डी" को उच्चारण syllable (दिमित्री) मा खडा भने, वा यी अक्षरहरू (दाऊद) को धेरै, व्यक्ति ठूलो आध्यात्मिक र कहिलेकाहीं शारीरिक बल परिभाषित। यो प्राकृतिक नेताहरूले हो। को unstressed syllable भने, जस्तै डेनिस को नाम, त्यसपछि यस्तो मानिस सफल हुन्छ (वा खोज्ने) दर्शक। यस्तो मान्छे, witty मिलनसार, तर व्यर्थमा छन्। यो लगभग सबै "डी" मानिसहरू मा नाम शारीरिक र शारीरिक सौन्दर्य आफ्नो पाहुना endow कि विश्वास छ। यसलाई आराम, सुशील, महंगी र ब्रांडेड कुराहरू लागि आफ्नो तरस निर्धारण गर्छ। तपाईं पत्र को जादुई महत्त्व विश्वास छैन, र बस एक सुन्दर हस्ताक्षरहरू प्राप्त गर्न "डी" मा उनको नवजात छोराको नाम टिप्न गर्न चाहनुहुन्छ? जे भए पनि तल विकल्प को एक चयन जाँच गर्नुहोस्।
प्राचीन नाम मानिसहरू लागि "डी" मा
लोकप्रिय विश्वास विपरीत यद्यपि, दाऊद - हिब्रू नाम, तिनीहरूले अक्सर केटाहरू रूस मा अभिषेक। उनि बाइबलीय राजा पछि नाम थिए, एक गोफन दुष्ट गोल्यतलाई संग हत्या एक Lad, रूपमा। यो वास्तवमा एक्लै साहस र दाऊदको आध्यात्मिक बल पुष्टि गर्छ। तर "डी" दुई पटक यसको नाम मा पाइन्छ, केही घमण्ड र पनि स्वार्थ भन्छन्। उहाँले, गर्व जिद्दी र व्यावहारिक छ। तर यो कवितात्मक नस को devoid छ। राजा दाऊदले जसको सौन्दर्य दुनिया captivated बाइबिल भजनमा को लेखक, छ कि केही लागि होइन। नाम दानियल पनि हिब्रू भाषा आउँछ। तर हामी यसलाई परिमार्जन र दानियलको स्लाव भाषाहरु फारममा फँस छ। दाऊदले "प्रिय" अर्थ भने, नाम अनुवाद गरिएको छ "परमेश्वरको -। मेरो न्यायाधीश" Danilo शांत स्वभाव, विचारशीलता र दया। प्राचीन नाम 'डी' मानिसहरू अहिले दुर्लभ छन्। जो "pacifying" डरेन ( "भेंट") अर्थ यो Dementii र Damian, Demidov ( "Zeus द्वारा गर्भधारण"), Denasy ( "अनन्त")। र जो को पहिलो भाग मा सम्पूर्ण कोहोर्ट नाम "राम्रो।" अर्थ तपाईं नायक epics पछि उसलाई कल गर्न सक्छन् - Dobrynia। यो मूल र फेसनदार।
तपाईं खिसी जीवनसाथी सिकार थियो किंडरगार्टन गर्न केटा चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले यसलाई तरिका सजिलो कल गर्न सक्नुहुन्छ। को "डी" (रूसी) प्रस्तावको लोकप्रिय पुरुष नाम धेरै व्यापक विकल्प छैन। यो दिमित्री (जसको अर्थ "कृषि Demeter देवी") र डेनिस ( "हँसिलो, आनन्दित")। साथै, त्यहाँ छन् Slavonic नाम Dragomir र Dobromyslov। Dmitriev capricious प्रकृति distinguishes, तर एकै समयमा तिनीहरूले बौद्धिक र ऊर्जावान, उत्तरदायी र मिलनसार छन्। डेनिस सावधान, व्यावहारिक। आफ्नो हँसिलो प्रकृति यो रोशनी मा सधैं गर्न अनुमति दिन्छ। Dobromyslov, रूप, आफ्नो नाम बाट स्पष्ट विचारशील र बुद्धिमानी, तर Dragomir द्वन्द्व परिस्थितिमा एक समझौता पाउन सक्षम छ।
को "डी" मा पुरुषहरु को लागि अमेरिकी नाम
यहाँ, हाम्रो विकल्प अत्यन्तै व्यापक अक्षरहरू 'डी' (डोराएन डेव डोनाल्ड) बाहेक, त्यहाँ रूसी "जे" को रूपमा अङ्कित छ जो पत्र "जे", किनभने छ। र मा अंग्रेजी नाम एक्लै छन्। तपाईं एक चयन गर्न सक्नुहुन्छ बालक लागि नाम गर्न "जे" र मेलोडिक इटालियन को। उदाहरणका लागि, Gianni, Jacopo, Giuseppe। तर, जो रूसी भाषा analogues छ को "जे" मा धेरै नाम छन्। त्यसैले, जर्ज जर्ज (यूरी) को रूप मा एक "दुई भाइ" छ। एन्क्रिप्टेड याकूबले याकूब र जुलियन - जुलियस। तर त्यहाँ प्रामाणिक नाम हुन्। उदाहरणका लागि, डेन्ट - नाम ठूलो इटालियन कवि Alighieri को सम्मान मा, नरक र प्रमोदवन वर्णन गरे।
अरब र तुर्की मानिसहरूका मा उत्पन्न गर्न पत्र "डी" संग धेरै सुन्दर पुरुष नाम। "भाग्यशाली" - जसको अर्थ "धनी" दबाव यो Dawlat। हामी तुर्क Damir - फलामको इच्छा संग लगातार मानिसको नाम साइन। दारा र Aleksandrom Makedonskim संग युद्धमा पराजित भए तापनि आफ्नो नाम धेरै लोकप्रिय छ। आखिर, यो अर्थ "धन को प्रभु।" भयानक Dayan ( "दण्ड") नम्र र सुन्दर नाम जज़ीरा ( "पानी को लागि हिंड्न") को विरोध छ। को तातार देखि अनुवाद एक Jemal - "सुन्दर"। यो दुवै फ्रान्सेली नाम अपिल गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, Desiree - अर्थ "स्वागत"। जर्मन नाम "Dietrich" - "बलियो" छ।
बेल्जियम भाषा। कुन भाषाहरु बेल्जियम बोलिएका छन्?
रूसी भाषा को ऐतिहासिक व्याकरण। भाषा को इतिहास को अध्ययन
स्वर पछि स्वर। स्वरवर्णको sizzling पछि
"Neutralize" शब्द - कसरी बुझ्न छ?
राजधानी - छैन केवल राजनीतिक केन्द्र हो
म्याक (मसी): विवरण, समीक्षा, फोटो
पासपोर्ट प्रतिस्थापन गर्न कुन कागजातहरू आवश्यक छ?
यो toxicosis सुरु गर्दा के, के गर्ने?
सानो खुट्टा स्थिर छैन। नवजात spokes लागि बुनाई मोजा
अनाज र बीउ को एक सरल र सुन्दर शिल्प कसरी बनाउने? आफ्नो हात को पुतली र सूर्यमुखी के
हाइड्रोजन पेरोक्साइड एड़ी को लागि: समीक्षा, आवेदन। हाइड्रोजन पेरोक्साइडको साथ हेलो कसरी हटाउनुहुन्छ?
ओठको गोदना बारेमा